Abavelisi besiCwangciso soKhuseleko kwi-Intanethi china abaThengi abaSebenzayo kwi-Intanethi kwiFektri kunye nabaxhasi
I-DDG-GYW Isenzi sokuSebenza sokuSebenza sokuSebenza
Isetyenziswa ngokubanzi ekucoceni imibhobho yezityalo kunye nokutya, kunye nemveliso yemichiza engcolileyo. Umlinganiso ofanelekileyo woxinaniso lweasidi kunye nemilinganiselo yokuqhuba kwesisombululo seetyuwa esiphezulu esingaphantsi kwe-10%.
I-DDG-GY yeShishini lokuSebenza ngokuKhanya / i-TDS Sensor
I-DDG-30.0 Isenzi sokuSebenza soShishino
Uthotho lwentsebenzo yoluhlu lwee-electrode zisetyenziselwa umlinganiso wexabiso lokuqhuba kwamanzi acocekileyo, amanzi acocekileyo, unyango lwamanzi, njl.njl.Lifanele ngokukodwa umlinganiso wokuqhutywa kwesityalo samandla eshushu kunye nonyango lwamanzi.
I-DDG-10.0 Isenzi sokuSebenza soShishino
I-DDG-1.0 Isenzi sokuSebenza soShishino
Uchungechunge lokuqhuba kwamashishini e-electrode lusetyenziselwa ngokukodwa ukulinganiswa kwexabiso lokuqhuba kwamanzi acocekileyo, amanzi acocekileyo, unyango lwamanzi, njl.
I-DDG-0.1F kunye ne-0.01F yokuSebenza koVavanyo lokuSebenza
I-DDG-0.1 Isenzi sesenzi sokuSebenza
I-DDG-0.01 yokuSebenza ngokuSebenza kwe-Electrode
I-BH-485-DD-10.0 Isenzi sesenzi sokuSebenza kwidijithali
Uthotho lwe-BH-485 ye-elektroniki yokuqhuba kwe-intanethi, embindini wee-electrode ukufezekisa imbuyekezo yeqondo lokushisa elizenzekelayo, ukuguqulwa kwesiginali yedijithali kunye neminye imisebenzi. Ngempendulo ekhawulezileyo, iindleko zokugcina ezincinci, ixesha lenene labalinganiswa bemilinganiselo ye-intanethi njl njl.
I-BH-485-DD-1.0 Isenzi sesenzi sokuSebenza kwedijithali
Uthotho lwe-BH-485 ye-elektroniki yokuqhuba kwe-intanethi, embindini wee-electrode ukufezekisa imbuyekezo yeqondo lokushisa elizenzekelayo, ukuguqulwa kwesiginali yedijithali kunye neminye imisebenzi. Ngempendulo ekhawulezileyo, iindleko zokugcina ezincinci, ixesha lenene labalinganiswa bemilinganiselo ye-Intanethi njl. I-electrode isebenzisa iModbus RTU (485) yomgaqo-nkqubo wonxibelelwano, unikezelo lwamandla lwe-24V DC, imowudi yocingo ezine inokufikelela okulula kakhulu kuthungelwano lwenzwa.
I-BH-485-DD-0.1 Isinxibelelanisi sokuSebenza kwedijithali